खेत खन्दा सुन र चाँदीका सिक्काले भरिएको माटोको भाँडो भेटियो ! - Nepali in Australia
December 26, 2020 autherLeaveaComment on खेत खन्दा सुन र चाँदीका सिक्काले भरिएको माटोको भाँडो भेटियो !
वास्तवमा, त्यहाँ खन्दै गर्दा सुन र चाँदीका सिक्का बाहिर आउन थाले । यी सिक्का पुरानो समयका हुन् । गाउँलेहरूले सिक्का ट्र्याक्टरको ट्रेलबाट खसेपछि थाहा पाएका हुन् । खेतमा भएको सम्पतिका बारेमा जानकारी पाउने बित्तिकै ठूलो संख्यामा गाउँलेहरू त्यहाँ भेला भए ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,
गाउँलेले सल्लाह गरे की यो राज्यलाई जानकारी दियो भने बेवारिसे सम्पत्ति राज्यको नै हुन्छ । यसैले सबै गाउँले मिलेर बाँडौ । र भेटिएको हैन भनौँ भन्ने सल्लाह भएको आजतकको दावी छ । तर अब यो विषयलाई प्रहरीले अनुशन्धान गर्ने भएको छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस्,,,